#Xulka Croatia oo markii ugu horeysay Gaarey Ciyaarta kama Dambeysta Koobka Aduunka | Get Latest News From Horn of Africa |
Kulan ciyaareedkii xiisaha lahaa ee udhaxeeyay dalalka England iyo Croatia ayaa waxaa kasoo baxay Natiijo aan la filayn, iyagoona isla gaaray 30 daqiiqo oo dheeri ah.
90-ka daqiiqo iyo wixii dheeriga ahaa waxay ku heshiiyeen natiijo 1-1, iyadoona goolka uu ku horeeyay xulka qaranka kubada cagta England, waliba qeybta labaad ayuu ka helay daqiiqadii 51aad ciyaaryahan Kieran Trippier.
Kieran Trippier, goolkiisa wuxuu ahaa mid Laad xur ah, iyadoona dhamaan maamulka iyo ciyaartoyda dalkaan Yurub ku yaala ay si wayn ugu dabaaldegeen.
Balse, xulka Croatia oo ahaa kuwa car-car ah ayaa waxaa goolka durbadiiba usoo bareejeeyay laacibka lagu magacaabo Ivan Perišić, kaasoo dhaliyay daqiiqadii 68aad.
Inta uu socday kulankoodaan ma jirin ciyaaryahan kaarka Gaduudan la siiyay, wallow ay jireen laacibiin loo taagay Kaarka Jaalaha ah oo labada dhinac ka tirsan.
Markii lagu daray 30-ka daqiiqadood, qeybta koowaad waxay ku kala baxayn bareejadii ay 90-ka daqiiqo wax ay isaga soo qaadi waayeen, wallow fursado badan ay abuureen.
Laakiin, qeybta labaad ayaa waxaa gool la yimid xulka qaranka Croatia, iyagoo ka helay laacibka kooxda kubada cagta Juventus ee Mario Mandžukić.
Goolka Mario Mandžukić ayaa wuxuu yimid daqiiqadii 110aad ee qeybta labaad, iyadoona uu ahaa mid qurux badan, islamarkaana si wayn looga soo shaqeeyay.
Ugu dambeyn, kulanka ayaa wuxuu kusoo dhamaaday 2-1 oo uu ku badiyay xulka Croatia, islamarkaana sidaas ay ugu soo baxayn Final-ka koobka aduunka 2018.
Xulka Faransiiska ayay wada dheeli doonan dalka Croatia, xili England iyo Belgium ay iyagana u tartami doonan kaalinta Saddexaad iyo Afaraad.
Guushaan waxay utahay Croatia midii ugu horeysay oo uu Ingiriiska kaga gaaro koobka aduunka, maadaama mar qura ay horey isugu arkeen, xiligaasna uu Ingiriisku badiyay.